FAKANA AN-KERINY : Hiditra amin’ny fikirakirana ireo teknolojiam-pifandraisana
Ankehitriny dia efa samy resy lahatra ny rehetra fa tena sakana amin’ny fandrosoana ny tsy fandriam-pahalemana. Ity farany izay miseho amin’ny endriny maro raha ny eto Madagasikara manokana, ary anisany sakana amin’ny sehatra maro. 19 octobre 2017
Endrika iray isehoan’ny tsy fandriam-pahalemana ny fakàna an-keriny izay nirongatra teto Madagasikara tato anatin’ny roa taona nifanesy, na izany mihatra amin’ireo teratany malagasy, na indrindra koa amin’ireo teratany vahiny.
Saika manerana ny Nosy dia ahitana izany tranga izany avokoa ankehitriny. Matetika dia an-tapitrisany maro no takalo takian’ireo olon-dratsy amin’ny fianakavian’ilay olona nalaina an-keriny, na amin’ny ray aman-dreniny mihitsy. Tsara marihana anefa fa misy amin’ny trangana fakàna an-keriny no valifaty noho ny olana teo anivon’ny fianakaviana ihany, na ny fiarahamonina. Raha ny fantatra ihany koa dia efa hary fomba tanteraka ny fitaovana ampiasain’ireo mpanao asa ratsy amin’ny fanatanterahany ny asany.
Noho ireo antony rehetra ireo no iarahan’ny ministeran’ny fitsarana sy ny ministeran’ny filaminam-bahoaka miasa amin’izao fotoana izao, miaraka amin’ireo tambajotra mikirakira ny tontolon’ny fifandraisana toy ny Artec. Tanjona amin’izao fiaraha-miasa izao ny handresy amin’ny ady amin’ny fakàna an-keriny eto Madagasikara. Raha ny fanazavana dia ny ministeran’ny filaminam-bahoaka no misahana ny fikarohana rehetra, raha toa kosa ka ny ministeran’ny fitsarana no hiandraikitra ny fanomezana sazy mifanaraka amin’ny heloka nataon’ireo mpaka an-keriny.
Araka ny fanazavana dia efa misy ny paikady napetraka amin’izay ady izay.
Efa mampiasa teknolojia vaovao ireo mpaka an-keriny ankehitriny, hoy ny tompon’andraikitra. Mba hahafahana mifanehitra amin’izy ireo araka izany dia tsy maintsy miditra amin’ny fampiasana fitaovana avo lenta kokoa ny mpitandron’ny filaminana. Izany dia manamora ary ihany koa, manafaingana ny fanenjehana ireo olon-dratsy. Amin’ny ankapobeny mantsy dia finday hatrany no hifandraisan’ireo jiolahy amin’ny fianakaviana na ireo takiana vola be. Efa tontosa ny alatsinainy lasa teo ny fifanaovan-tsoniam-piaraha-miasa amin’ny ady amin’ny fakàna an-keriny, teny amin’ny ministeran’ny fitsarana Faravohitra.
Mivoy resa-poko sy fankahalana ny filohan’ ny oniversiten’i Toamasina sy ny ekipany RAHARAHA BARIKADIMY (4673) 25 février 2021 Hivadika ho “tolona” ny tatitry ny Depiote Tim MIKATSAKA FANDATSAHAN-DRA (231) 25 février 2021 Namoahana “Filazana Fikarohana” i Marco Randrianisa FIANTSOANA “ACTE ISOLÉS” (143) 2 mars 2021 Tsy hiara-dalana amin-dRavalomanana intsony ? FANAMBARAN’NY ANTOKO MFM (138) 2 mars 2021 Handray andraikitra hatrany hisorohana izay rehetra mety ho fanakorontanana EMMO/NAT (78) 25 février 2021 « Hatao laharam-pahamehana ny fampianarana » FILOHAM-PIRENENA ANDRY RAJOELINA (70) 25 février 2021